Inkscape 1.1 inosvika gore rakazotakurwa nenhau | Linux Vakapindwa muropa
Yakanga iri mukusimudzira kweanopfuura makore gumi neshanu mushure maizvozvo vakatanga iyo v1.0… Izvo zvaive zvichiri kukura. Kare gore rapfuura, pakutanga kwa Chivabvu 2020, vakaburitsa vhezheni yekutanga iyo yaisanganisira chero tag yekuvandudza uye vaive vabuda muzvikamu zvealpha uye beta, uye uno Muvhuro vakakanda Inkscape 1.1, yekutanga yekuvandudza yakakosha mugore rinouya rakatakurwa nenhau dzinogona kuoneka kubva pakutanga kweapp, nekuti inosanganisira itsva yekugamuchira skrini.
Kupfuura yekugamuchira skrini, iri dialog nyowani yatinogona kushandisa kugadzirisa mamwe ma parameter, senge saizi yegwaro ratiri kuda kugadzira, ruvara rwematanda, mamodheru emara, mapfupi ekhibhodi, mapoka emusoro uye kunyange zvimwe zvinhu. Pazasi iwe une runyorwa neiyo nhau dzakatanhamara izvo zvauya neInkscape 1.1.
Inkscape 1.1 Pfungwa
Nhaurwa nyowani yekugamuchira iyo inotibvumidza isu kugadzirisa mamwe ma parameter.
Nyowani yekuraira palette (Raira Palette) iyo yakavhurwa nekiyi? uye inokutendera iwe kuti uwane uye ushandise boka remabasa pasina kuita kumamenyu kana mapfupi ekhibhodi.
Nzvimbo nyowani yechiitiko chechiteshi, ichivandudza iyo Dialog Docking System kuti iite kuti ishande zvirinani uye ive yakanyanyisa.
Iyo yekutsvaga bar inokutendera iwe kuti uwane zvaunofarira marongero, pakati pezvimwe zvinhu.
Mutsva wekunongedzera mamiriro, uchibvumidza kuratidza mbeveve kuona (opacity) yemadhirowa kumashure kwemitsara uye anonoka-anonzwisisa.
Kunatsiridzwa kwematurusi aripo, senge macalligraphy, izvo zvave kunyatsojeka.
Nyowani LPE (Live Nzira Mhedzisiro), iyo inobvumidza kupatsanura chinhu muzvikamu zviviri kana kupfuura pasina kuparadza chepakutanga, pakati pemimwe mhedzisiro.
Iye zvino unogona kutumira kunze nekukurumidza kune mafomati sePNG, JPG, WebP uye TIFF.
Inkscape 1.1 inowanikwa kubva Muvhuro uno, saka ikozvino inogona kutorwa kubva ku webhusaiti yepamutemo yeprojekti kune ese akatsigirwa masystem. Vashandisi veLinux vanogona kuitora se AppImage, pasuru Snap, pasuru Flatpak uye kunyangwe kubva kuPPA yeUbuntu. Kugoverwa kwakawanda kunowanikwa munzvimbo dzepamutemo, asi ivo vachazoda kugadzirisa iyo pasuru kune yazvino vhezheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Inkscape 1.1 inosvika gore mushure mekutanga yakagadzikana vhezheni yakatakurwa nenhau